Zawgyi Keyboard for iOS Development - Saturngod
Zawgyi Keyboard for iOS Development
Posted on Updated November 20, 2010 November 20, 2010 by saturngod
Zawgyi keyboard ကို iOS အတွက်ကတော့ MMKeyboard အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကျွန်တော့်မှာ လက်ရှိ Ornagai အတွက်ရေးထားတဲ့ MMKeyboard ရှိတယ်။ Ornagai Myanmar To English Dictionary အတွက်ပေါ့။ MMKeyboard ကို တွေ့တော့ စဉ်းစားမိတာ တစ်ခုရှိတယ်။ မြန်မာစာ iPhone Application တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ မြန်မာစာ keyboard ပြဿနာ ဖြစ်နေတာပဲ။ မြန်မာစာ keyboard မပါတော့ မြန်မာလိုရိုက်လို့မရဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် Ornagai မှာ သုံးမယ့် Keyboard ကို Open Source ပေးဖို့ စဉ်းစားမိတယ်။ သာမာန်လူတွေ အနေနဲ့ကတော့ မြန်မာစာရိုက်ဖို့ MMKeyboard က အဆင်ပြေပါတယ်။ Developer တွေအတွက်ကတော့ ကိုယ်ပိုင် Keyboard ရှိမှပဲ မြန်မာလိုရိုက်မယ့် Application တွေ အဆင်ပြေမှာ။ တစ်ခြား အပိုင်းတွေက လေ့လာလို့ရပေမယ့် keyboard ရေးဖို့ကတော့ ရှာလို့တွေ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်လည်း အစက မရေးတတ်ပါ။ အခု အလုပ်မှာ Objective C ကြီးပဲ တောက်လျှောက်ရေးနေရတော့ နည်းနည်းလေး သိသွားတယ်ဆိုရမယ်။ အခု ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ဟာလေးကို လေ့လာပြီး ယူသုံးလိုက်ရင် iOS developer တွေအနေနဲ့ မြန်မာ App တွေ များများထွက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
လက်ရှိ code ကိုတော့ bitbucket မှာ တင်ထားပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထပ်ဖြည့်မယ်။ ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်း bitbucket မှာပဲ fork တွေ ထပ်ခွဲပြီး ရေးစေချင်တယ်။ အဲဒါဆိုရင် ကျွန်တော်လည်း ဘာတွေလိုအပ်တယ်။ ဘာတွေ ထပ်ဖြည့်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ သိလာနိုင်တယ်။ bitbucket မှာတော့ fork တွေ ပြန်ပေါင်းလို့ရမရ သေချာမသိဘူး။ Github မှာတော့ ရတော့ထင်တယ်။ အခု version က Portrait ပဲ ရပါသေးတယ်။ Landscape အတွက်ကလည်း မခက်ပါဘူး။ Ornagai မှာ Landscape မပါလို့ မထည့်ထားမိဘူး။ ကျွန်တော် နောက်မှ ထပ်ပြီး Landscape အတွက် ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုပါ ထပ်ဖြည့်ပေးထားပါမယ်ဗျာ။
« MMKeyboard iချင်း »
ကောင်းလေစွ ကိုစေတန် ကျေးဇူးပါ။ ဒါပေမယ့် ပါဝင်ဆင်နွှဲချင်သော်လည်း နောက်များမှ ပါဝင်နိုင်တော့မယ်။ Mac ကိုစောင့်လိုက်အုန်းမယ်။ ဒါပေမယ့် ယူတော့သုံးမယ်နော်။ 🙂
Ubuntu install လုပ်ပြီး internet ဘယ်လိုချိတ်သလဲ?။
ကျွန်တော်စက်မှာ dual mode ပုံစံနဲ့ Ubuntu တင်ထားပါတယ်။ internect connection မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ connection ချိတ်ရင် ကျောင်းက vpn ခံပြီးပေးထားတယ်။ အခုကျောင်းက net free ပေးထားတယ်။ ip address နာမည်၊ အခန်းနာမည်တွေနဲ့ free ပေးထားတော့ အင်တာနက်ကို ဘယ်လိုသွားချိတ်ရမလဲ မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ စက်က desktop အမျိုးအစား core2duo ပါ။ သိရင် ဖြေပေးပါဦး။
ကျောင်းကပေးထားတာ wifi လား။ wifi ဆိုရင်တော့ စက်မှာ wifi ပါမှ ရပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆိုရင် မေးစရာရှိရင် user.mysteryzillion.org မှာ သွားမေးစေချင်ပါတယ်။ post နဲ့ မသက်ဆိုင်လို့ပါ။
အရင် 3.1.3 တုန်းက သုံးတဲ့ ikeyex zawgyi keyboard လေးကို ios4အတွက် လိုချင်တယ်ဗျာ။ ကျတော်သယ်ရင်းဆို Ios4မှာ အဲဒီကီးဘုတ်မရလို့ သူဖုန်းးကို အပ်ဒိတ်မလုပ်ဘူးတဲ့ဗျ။
Other Myanmar Developer is working on now … you can use , soon…
zawgyi keyboard ကို iOSမှာapplicationတစ်ခုအနေနဲရေလို့မရဘူးလား။
you can search mmkeyboard on app store. If you are using iPad, you can use znotepad.
Ye Lin Htun says:
bitbucket’s link is dead bro.